Atemmufo 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yuda ne Simeon nkonimdi (1-20)
Yebusifo kɔɔ so tenaa Yerusalem (21)
Yosef ko faa Betel (22-26)
Wɔantu Kaananfo no nyinaa (27-36)
1 Yosua wu akyi no,+ Israelfo* no bisaa Yehowa sɛ:+ “Yɛn mu hena na onni kan mforo nkɔ na ɔne Kaananfo nkɔko?” 2 Na Yehowa kae sɛ: “Yuda na ɔbɛkɔ.+ Hwɛ! Mede asaase no bɛhyɛ ne nsa.”* 3 Ɛnna Yuda ka kyerɛɛ ne nua Simeon sɛ: “Wo ne me nkɔ* asaase a wɔde ama me*+ no so na yɛne Kaananfo nkɔko. Yewie a, me nso me ne wo bɛkɔ asaase a wɔde ama wo no so.” Enti Simeon ne no kɔe. 4 Bere a Yudafo no foro kɔe no, Yehowa de Kaananfo ne Perisifo no hyɛɛ wɔn nsa,+ na wodii nnipa 10,000 so nkonim wɔ Besek. 5 Wohuu Adoni-Besek wɔ Besek, na ɛhɔ na wɔne no koe, na wodii Kaananfo+ ne Perisifo no so nkonim.+ 6 Bere a Adoni-Besek guanee no, wodii n’akyi kɔkyeree no, na wotwitwaa ne nsa kokurobeti ne ne nan kokurobeti. 7 Ɛnna Adoni-Besek kae sɛ: “Ahemfo 70 a wɔatwitwa wɔn nsa kokurobeti ne wɔn nan kokurobeti sesaw aduan wɔ me pon ase. Nea meyɛe no, Onyankopɔn ayɛ me bi atua ka.” Ɛno akyi no, wɔde no baa Yerusalem,+ na owui wɔ hɔ. 8 Bio nso, Yudafo ne Yerusalemfo kɔkoe,+ na Yerusalem kurow no bedii Yudafo nsam. Wɔde sekan kunkum kurow no mufo, na wɔhyew kurow no. 9 Ɛno akyi no, Yudafo no sianee, na wɔne Kaananfo a wɔte bepɔw so ne Negeb ne Sefela+ no kɔkoe. 10 Enti Yudafo no kɔtow hyɛɛ Kaananfo a wɔte Hebron no so, na wokum Sesai ne Ahiman ne Talmai.+ (Bere bi, na wɔfrɛ Hebron sɛ Kiriat-Arba.) 11 Wofii hɔ no, wɔtoaa so kɔɔ Debirfo so.+ (Kan no, na wɔfrɛ Debir sɛ Kiriat-Sefer.)+ 12 Afei Kaleb+ kae sɛ: “Ɔbarima a obetumi ako afa Kiriat-Sefer no, mede me babea Aksa bɛma no aware.”+ 13 Ɛnna Kaleb nua kumaa Kenas ba+ Otniel+ kɔko fae. Enti Kaleb de ne babea Aksa maa no waree. 14 Bere a Aksa rekɔ fie no, otutu guu ne kunu asom sɛ ommisa asaase mfi ne papa hɔ. Ɛnna Aksa si fii n’afurum no so.* Na Kaleb bisaa no sɛ: “Ɛdɛn na wopɛ?” 15 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mepa wo kyɛw, hyira me. Woadi kan ama me asaase wɔ anaafo.* Fa Gulot-Maim* nso ma me ɛ.” Enti Kaleb de Gulot Atifi ne Gulot Anaafo maa no. 16 Na Mose asebarima+ a ɔyɛ Kenini+ no, n’asefo ne Yudafo fi mmɛ kurow+ no mu baa* Yuda sare a ɛwɔ Arad+ anaafo no so. Na wɔkɔɔ hɔ ne ɛhɔfo kɔtenae.+ 17 Na Yuda ne ne nua Simeon toaa so kɔtow hyɛɛ Kaananfo a wɔte Sefat no so, na wɔsɛee kurow no pasaa.+ Enti wɔtoo kurow no din Horma.*+ 18 Afei, Yuda ko faa Gasa+ ne ɛho nsaase, Askelon+ ne ɛho nsaase, ne Ekron+ ne ɛho nsaase. 19 Yehowa dii Yuda akyi, na wɔfaa nsaase a ɛwɔ bepɔw so no, nanso wɔantumi antu wɔn a wɔtete obon no mu* no, efisɛ na wɔwɔ nteaseɛnam a sekan tuatua ho.*+ 20 Wɔde Hebron maa Kaleb sɛnea Mose kae no,+ na otuu Anak mma baasa no+ fii hɔ. 21 Nanso Benyaminfo no antu Yebusifo a wɔte Yerusalem no, na Yebusifo no kɔɔ so ne Benyaminfo tenaa Yerusalem de besi nnɛ.+ 22 Yosef fifo+ foro kɔtow hyɛɛ Betel so, na Yehowa dii wɔn akyi.+ 23 Yosef fifo no wiaa wɔn ho kɔhwɛɛ Betel. (Kan no, na kurow no din de Lus.)+ 24 Na wɔn a wɔsomaa wɔn no huu ɔbarima bi sɛ ofi kurow no mu reba. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛpa wo kyɛw, kyerɛ yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so awura kurow no mu, na yɛne wo bedi no yiye.”* 25 Enti ɔbarima no kyerɛɛ wɔn ɔkwan a wɔbɛfa so awura kurow no mu. Na wɔde sekan kunkum kurom hɔfo, na ɔbarima no ne n’abusuafo de, wogyaa wɔn nyinaa.+ 26 Na ɔbarima no kɔɔ Hitifo asaase so, na ɔkɔkyekyee kurow bi too hɔ din Lus. Na saa na wɔfrɛ hɔ de besi nnɛ. 27 Manase amfa Bet-Sean ne ɛho nkurow, Taanak+ ne ɛho nkurow, Dorfo ne nkurow a atwa wɔn ho ahyia, Yibleamfo ne nkurow a atwa wɔn ho ahyia, ne Megidofo ne nkurow a atwa wɔn ho ahyia.+ Kaananfo no kɔɔ so tenaa asaase yi so. 28 Bere a Israelfo no yɛɛ den no, wɔmaa Kaananfo no yɛɛ nkoadwuma,+ na wɔantu wɔn nyinaa amfi hɔ.+ 29 Efraim nso antu Kaananfo a wɔte Geser no amfi hɔ. Mmom Kaananfo no kɔɔ so ne wɔn tenaa Geser.+ 30 Sebulon antu Kitronfo ne Nahalolfo+ no. Kaananfo no kɔɔ so ne wɔn tenae, na wɔmaa Kaananfo no yɛɛ nkoadwuma.+ 31 Aser antu nnipa a wɔte Ako ne nnipa a wɔte Sidon+ ne Ahlab ne Aksib+ ne Helba ne Afik+ ne Rehob+ no. 32 Enti Aserfo no kɔɔ so ne Kaananfo a wɔwɔ asaase no so no tenae, efisɛ wɔantu wɔn. 33 Naftali antu nnipa a wɔte Bet-Semes ne nnipa a wɔte Bet-Anat+ no, mmom wɔkɔɔ so ne Kaananfo a wɔwɔ asaase no so no tenae.+ Na wɔde nnipa a wɔte Bet-Semes ne Bet-Anat no yɛɛ nkoadwuma. 34 Amorifo maa Danfo no kaa bepɔw no so, na wɔamma wɔansian amma obon no mu.*+ 35 Enti Amorifo no kɔɔ so tenaa Heres Bepɔw so ne Ayalon+ ne Saalbim.+ Nanso bere a Yosef fifo nyaa tumi* kɛse no, wɔde Amorifo no yɛɛ nkoadwuma. 36 Amorifo hye no, na efi ase wɔ Akrabim koko+ so, na na ɛsan nso fi ase wɔ Sela foro kɔ soro.
^ Anaa “ahyɛ ne nsa.”
^ Nt., “ɛyɛ me kyɛfa.”
^ Anaa “foro baa.”
^ Anaa “nnade nteaseɛnam.”
^ Nt., “yɛbɛda ɔdɔ a enni huammɔ adi akyerɛ wo.”